Zirconium inoshandiswa zvine hunyanzvi hwekuita zvemoto, kubuda uye kuvesa moto. Iyo inoshandiswa seanodonhedza mumiriri mune enyukireya ma reactors Mune yekutsiva machubhu, magetter anoshandiswa zvakare mune zvesimbi-zvedongo zvisimbiso. Yakasimba yekudzora mumiririri, inopupa mumiririri, yakaomeswa carbide yekuwedzera uye hupfu simbi
Muchivharo chekuita sechigadziro, mukugadzira furo simbi seahydrogen sosi, uye inogona kushandiswa sosi yekuchena kwakanyanya hydrogen, inogona zvakare kushandiswa simbi-ceramic kuvhara uye poda simbi kune chiwanikwa poda titanium. Inoshandiswa pakushongedza, inogona kushandiswa sechinhu chinokonzera polymerization
yeupfu simbi, ine zirconium, niobium, hafnium uye imwe metaloxides kudzikisira, uye uwane iyo inoenderana poda yesimbi. Inogona kushandiswa seyakareruka hydrogen inogadzira mumiriri yekushaya mvura, hydrogenation, condensing ordesiccant ye organic makomponi.
Inoshandiswa muatomic simba indasitiri uye indasitiri yemuchadenga. Inoshandiswa senge yekudzora tsvimbo zvinhu zve nyukireya reactors, inogona kushandiswa sediki uye ine simba roketi inosimudzira.
Vanadium hydride (VH2), kana tembiricha ikakwira kubva pa25 ° C kusvika 200 ° C, kumanikidzwa kwehydrogen kubuda kuchakwira zvakanyanya kubva pa0.99 mpa (1.9 mhepo yekudenga) kusvika 87 87 (870 mhepo yekudenga), iyo inogona kunzi ndeye compressor yakanaka.